တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် စီးပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြတဲ့ ဖိနပ် | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Home / Slipper / တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် စီးပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြတဲ့ ဖိနပ်
တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် စီးပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြတဲ့ ဖိနပ်
Maung Pauk 12:00 PM Slipper
တရုတ် တိုင်းရင်း နည်းပညာအရ ခြေဖဝါး သည် တကိုယ်လုံး ရဲ့အကြော ရှိရာနေရာဖြစ်ပါတယ်..
အဲဒီ အကြော များကို ပုံမှန် နှိပ်ပေးခြင်းဖြင့် သွေးလည်ပတ်မှု ပိုကောင်းစေပြီး သက်ဆိုင်ရာ အကြောများ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ပိုမိုစေပါတယ်..
၁ရက်ကို ၁၅မိနစ်မှ ၂၀မိနစ်လောက် အသုံးပြုရုံနဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း ,စိတ်တင်းကျပ်မှု လျော့ပါးခြင်း, ကျောက်ကပ်နှင့် ကိုယ်တွင်းနာကျင်မှုများလျော့ပါးခြင်း, စားဝင်အိပ်ပျော်ခြင်း,
-သွေးတိုးလျော့ကျ-ဆီးချို သက်သာ-ကာမ အားတိုး စေပါတယ်
-ခေါင်းအုံ,ခေါင်းခဲဖြစ်သူများ ပုံမှန်သုံးပါက ၃လတွင် တဖြည်းဖြည်းသက်သာ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်...
-ကျန်းမာရေးဖိနပ်သည် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်းကြောင့် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို တိုးတက်စေပါသည်...
-ခြေထောက်ကျင်ခြင်း, ထုံခြင်း, လေဖြတ်နေသောသူများ အားလုံးဝေဒနာ သက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
-Foot Message နိုပ်သကဲ့သို့ တူညီသော အကျိုးကို ရရှိပါသည်...
-အိမ်တွင်းအားလပ်ချိန်မှာ အပန်းဖြေ အနိုပ်ကိရိယာ တစ်ခုကဲ့သို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
-ကျန်းမာရေးဖိနပ်တွင်ကပ်ခွာပါသောကြောင့် ခြေဖမိုးကြီးသောသူ သေးသောသူ အားလုံးပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...
ရုံးတွင်းဆိုင်တွင်း ,companyများတွင် အလုပ်လုပ်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အညောင်းအညာသက်သာစေရန်နှင့် အလုပ်အား ပိုမို အာရုံစိုက်နိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိသောကြောင့် ဆောင်ထားသင့်တဲ့ ဖိနပ်အမျိုးအစားလည်းဖြစ်ပါတယ်..
ဈေးနှုန်းက 18000 ကျပ်ဖြစ်ပြီးမှာယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 09451689031, 09 787179972 ကို မှာယူနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်..
ခွဖေဝါးလေးကို နှိပျနယျပေးမယျ့ ကနျြးမာရေးအနှိပျ ဖိနပျ
တရုတျ တိုငျးရငျး နညျးပညာအရ ခွဖေဝါး သညျ တကိုယျလုံး ရဲ့အကွော ရှိရာနရောဖွဈပါတယျ..
အဲဒီ အကွော မြားကို ပုံမှနျ နှိပျပေးခွငျးဖွငျ့ သှေးလညျပတျမှု ပိုကောငျးစပွေီး သကျဆိုငျရာ အကွောမြား စှမျးဆောငျနိုငျရညျ ပိုမိုစပေါတယျ..
၁ရကျကို ၁၅မိနဈမှ ၂၀မိနဈလောကျ အသုံးပွုရုံနဲ့ သှေးလညျပတျမှုကောငျးခွငျး ,စိတျတငျးကပျြမှု လြော့ပါးခွငျး, ကြောကျကပျနှငျ့ ကိုယျတှငျးနာကငျြမှုမြားလြော့ပါးခွငျး, စားဝငျအိပျပြျောခွငျး,
-သှေးတိုးလြော့ကြ-ဆီးခြို သကျသာ-ကာမ အားတိုး စပေါတယျ
-ခေါငျးအုံ,ခေါငျးခဲဖွဈသူမြား ပုံမှနျသုံးပါက ၃လတှငျ တဖွညျးဖွညျးသကျသာ ပြောကျကငျးစပေါတယျ...
-ကနျြးမာရေးဖိနပျသညျ သှေးလညျပတျမှုကောငျးခွငျးကွောငျ့ ကိုယျခံအားစနဈကို တိုးတကျစပေါသညျ...
-ခွထေောကျကငျြခွငျး, ထုံခွငျး, လဖွေတျနသေောသူမြား အားလုံးဝဒေနာ သကျသာစရေနျအသုံးပွုနိုငျပါတယျ...
-Foot Message နိုပျသကဲ့သို့ တူညီသော အကြိုးကို ရရှိပါသညျ...
-အိမျတှငျးအားလပျခြိနျမှာ အပနျးဖွေ အနိုပျကိရိယာ တဈခုကဲ့သို့ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ...
-ကနျြးမာရေးဖိနပျတှငျကပျခှာပါသောကွောငျ့ ခွဖေမိုးကွီးသောသူ သေးသောသူ အားလုံးပါ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ...
ရုံးတှငျးဆိုငျတှငျး ,companyမြားတှငျ အလုပျလုပျနသေော စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြား အညောငျးအညာသကျသာစရေနျနှငျ့ အလုပျအား ပိုမို အာရုံစိုကျနိုငျသော အကြိုးကြေးဇူးမြား ရရှိသောကွောငျ့ ဆောငျထားသငျ့တဲ့ ဖိနပျအမြိုးအစားလညျးဖွဈပါတယျ..
စြေးနှုနျးက 18000 ကပျြဖွဈပွီးမှာယူခငျြတယျဆိုရငျတော့ 09451689031, 09 787179972 ကို မှာယူနိုငျတယျလို့သိရပါတယျ..
IDOL SLIM Coffee ( အဆီကျ ကော်ဖီ )
IDOL SLIM Coffee ( အဆီကျ ကော်ဖီ ) အရသာရှိတဲ့ ကော်ဖီမွှေးမွှေးလေးကို သောက်ရင်း ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ မလိုအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေကို ချပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ...
Six Pack အလှကိုဖော်ဆောင်ပြီး ပျိုမေတို့အကြား ရေပန်းစားစေချင်တဲ့ Bro တို့တွက် EMS Fitness အဆီချစက်
လက်မောင်းနဲ့ ဗိုက်မှာအဆီပိုတွေများနေလို့ အဆီပိုတွေကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားစေပြီး ကျော့ရှင်းလှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားကို ပြန်လည်ပိုင်ဆိုင်စေ...
Gluta Extra White7 အသားဖြူဆေးGluta Extra White7 အသားဖြူဆေး
ဒီဆေးက အသားဖြူ တာ တခုထဲတင်မဟုတ်ပါဘူး 🌈အသားအရည်ကို ပန်းရောင်သန်းပြီး ကြည်လာစေတယ်. 🌈ပင်ကိုယ်အသားအရည်လှပချောမွတ်နေသကဲ့သို့ သဘာဝအတိုင်း ဖြ...
အဆီကျလမ်းလျှောက်စက် Fitness Mini Stepper
အမှန်အကန် ကိတ်ချင်သူများအတွက် Over Doomz (ရင်ကြီးေ...
အစာအိမ်​ နဲ့ အူလမ်း​ကြောင်း ထဲကအညစ်​အ​ကြေး​တွေ​က...
တစ်ကိုယ်လုံးနေရာ မရွေးအဆီချစက် Body innovation ma...
တစ်နေ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် စီးပြီး လမ်းလျှောက်ပေးရုံနဲ...
Magic White ချိုင်းဖြူ cream
ပေ၃၀၀၀ အကွအဝေးထိ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည့်ရှုနိုင်မယ့်...
FDA နဲ့ GMP အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံချက်လက်မှတ်များရရှိ ...
Gluta Extra White နဲ့ အသားရေကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်း...